रवि लामिछाने र निकिता पौडेलसँगको पहिलो अन्तरबार्ता ! प्रेमजीवन, बिगतको वारेमा खुलेर बोले – ThikThak News
आज प्रेम दिबसको अबसरमा प्रस्तोता सबिना कार्कीले रबि लामिछाने र निकिता पौडेल संग भएको रमाइलो कुराकानी सार्बजनिक भएको छ। प्रस्तोताले धेरै श्रोताहरुको अनुरोधमा रवि लामिछाने र निकिता पौडेलसँगको कुराकानी गरेको हो। आज प्रेम दिबसको अवसर रबि लामिछाने र निकिता बिचको प्रेमको बारेमा यस अन्तरबार्तामा कुरा भएको हो। उनीहरुले आफ्नो बारेमा खुलेर पहिलो पटक कुनै मिडिया मार्फत यसरि प्रस्तुत भएका हुन्।
रबि र निकिताले पहिलो पटक दुवैले आफ्नो प्रेमजीवन, विगतको अनुभव, भविष्यको आशा मन खोलेर यस अन्तर्वार्तामा बाँडेका छन् ! सिधा कुरा जनता कार्यक्रम संचालक रबि लामिछानेले केहि समय अघि मात्र निकिता पौडेल संग जिल्ला अदालत पुगेर कोर्ट म्यारिज समेत गरिसकेका छन्। अब केहि समय पछि रितिरिवाज पुर्बक बिबाह गर्ने उनीहरुको योजना रहेको छ।
यस अन्तर्वार्तामा दुबैले आफ्नो मनको सबैकुरा र प्रेमको पल खुलेर साटेका छन्। रबि निकिताको पहिलो युगल अन्तर्वार्ता शिर्षक रहेको यस अन्तरबार्ता लाइ साउण्ड क्लाउड अन्तर्गत सब्स्कास्ट मा सुन्न सकिन्छ। यस्तो छ अन्तर्वार्ताको अडियो
हरिकाजीको २ हात १ खुट्टा काटियो ! यस्तो दर्दनाक, कसको आसु नझर्ला । आर्थिक सहयोगको अपिल
Previous Article स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भए / नभएको मोबाइलबाटै हेर्न मिल्ने ! यसरि थाहा पाउनुहोस्
Next Article नायिका बर्षा र संजोग कोइरालाको बिबाह , दुलाहा दुलही यस्तो देखियो